Diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka oo duqeymo ka geystay gobolka Idlib. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka oo duqeymo ka geystay gobolka Idlib.
On Sep 9, 2018 232 0
Wararka ka imaanaya gobolka xurta ah ee Idlib ee wadanka Suuriya ayaa ku waramaya in diyaaradaha Ruushka iyo kuwa nidaamka Nuseyriyada ay saacadihii lasoo dhaafay duqeymo ka geysteen deegaanno katirsan gobollada Idlib iyo Xammaah.
Dadka firfircoon ee soo tabiya wararka Jihaadka iyo kacdoonka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo dhowr ah oo geystay khasaare nafeed ay ka dheceen gobollada Idlib iyo Xammaah, kuwaas oo ay geysteen diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bashaar Al-Asad.
Duqeymaha dhacay tan iyo shirkii Jimcaha ka dhacay magaalada Dhahraan ee dhexmaray Ruushka, Iiraan, iyo Turkiga ayaa gaaraya 81 duqeyn, waxaana intaas dheer duqeymaha ay nidaamku u adeegsadeen madaafiicda dhulka oo gaaray 51 duqeyn dhowr maalmood gudahoood.
Ugu yaraan 4 ruux ayaa la sheegayaa iney ku shahiideen duqeymahan oo ka dhacay deegaannada dhaca baadiyaha Idlib iyo Xammaah.
Gobolka Idlib ayaa waxaa ka taagan xaalad istinfaar ah oo ay dadku ku muujinayaan iney diyaar u yihiin iney ka difaacdaan dhulkooda xamlada milliteri ee ay macquulka tahay iney kusoo qaadaan Ruushka iyo Nidaamka.
Jimcihii banaan baxyo ka dhacay gobolka Idlib salaadda jimcaha kadib ayaa waxaa halkudhig looga dhigay “Khiyaarkeena waa muqaawamada”, waxaana dadka wejiyadooda ka muuqday sida ay diyaarka ugu yihiin iska caabinta cudwaanka Ruushka.